Gola Teekinoloojii – Page 3 – Teekinooloojii Biiyaa Jaapi waliin aburaa!
Neetwork jechuun maal jechuudha ? Netwoork jechuun akka termii afaan teekinoolojitin yommu meeshaalen networki bifa sararaf shiboo(cable) fayyadamuun ykn bifa sarara maletiin (wireless) wal qunaman network jechuudhaan ibsina. Wal qunnamtiin kunis meeshaale…
Gulaallii/Gulaallii Meshaa/Gulaallii Moosaajii
Komputeeraaf antivaayirasin gaarin kami ?
Antivaayirasin gosa mosaajii vayirasi komputera ,bilbila,tabileti keenya balleessuu ykn hojin ala kan godhu kan ittisudha. Komputera kessanniif antivaayirasi gaari filachuuf ilaalcha kessa kan galuu qabu qabxilee armaan gaditi. -Sadarkaan dandeetti fayyadama komputera…
Vaayirasiin maali? Vayirasinis jalqabiin isaa shakala dandeetti walitti agarsisuutin kan jalqabame ture,kunis piroogrameronnii koodii addaa addaa barressu dandaahan dandeettii isaanii waliti agarsisuuf yunivarsiti kessatti kan isaan jalqabanidha. Karaa biraa vaayirasii jechuun gosa…